Xinhua Myanmar - မြန်မာ-ဟန်ဂေရီ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ဆွေးနွေး
မြန်မာ-ဟန်ဂေရီ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ဆွေးနွေး
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေနှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်(ဓာတ်ပုံ- သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန) Politics, Law & Military
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မြန်မာ-ဟန်ဂေရီ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး အခြေအနေများကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေနှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E.Mr. Peter Szijjarto တို့ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြကြောင်း သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သော သတင်းအရ သိရသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ဟန်ဂေရီ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ ကုန်သွယ်မှုတိုးမြှင့်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရေးနှင့် ပညာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြကြောင်း သိရသည်။
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေသည် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E.Mr. Peter Szijjarto နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်၊ သံတမန်ဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ယင်းတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။(Xinhua)
Previous Article ၁၃ ကြိမ်မြောက် အေဆမ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးမှ သိသာ ထင်ရှားသည့် တိုးတက်မှုများ ရရှိခဲ့ဟု နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ပြောကြား
Next Article ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၌ WYစိတ်ကြွဆေးပြား ၉ သိန်းကျော် သိမ်းဆည်း ရမိ